China eyeshadow palette onwe labelụ omenala N'ogbe eyeshadow pigmenti palette eke eyeshadow palette ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Mma Mma
Matte mmiri mmiri lipstick
Ngwa egbugbere ọnụ
Mmanụ dị ọcha
Matte egbugbere ọnụ osisi onwe labelụ mejupụtara egbugbere ọnụ osisi vend ...
Lip liner onwe labelụ obi ọjọọ free omenala logo vel ...
Liquid lipstick na egbugbere ọnụ liner ka N'ogbe omenala l ...
N'ogbe egbugbere ọnụ osisi omenala logo vegan velvet egbugbere ọnụ sti ...
Gba ọtọ egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ ọtọ ịgba ọtọ kenkowaputa lipg ...
Lipgloss ere ahịa omenala egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ diy c ...
OEM ihu ntọala etemeete mmiri mmiri N'ogbe omenala p ...
N'ogbe eyeshadow palette vegan elu ink priva ...
Eyeshadow palette onwe labelụ omenala N'ogbe eyeshadow pigmenti palette eke eyeshadow palette
Nnukwu agba anya anya na-esi na mattes na satins ruo shimmers na glitters. Were otu n'ime palettes ndị a site n'ụbọchị ruo n'abalị na ọkụ na ụdị agba niile nwere ike ị nweta!
EXW Ahịa: US $ 0.99 - 2.99 / Ibe
Min.Order ibu: 3000 Ibe / iberibe
OEM. ODM: Dị
High pigmenti eyeshadow agba, silky nro na siri ntụ ntụ udidi, ezi extensibility, nke mere na agba nwere ike na-Layered, mmetụta bụ Long-adịgide adịgide, eke na maa mma, Ọ dịghị ntụ ntụ, Ọ dịghị smudge.
Agba agba ọgaranya ma dị egwu. Colorsdị palette eyeshadow dị na mattes na satins na shimmers na glitters, ya mere, ụda nwere ike ịdị iche na nkuku nke akpụkpọ ahụ ma nwee mmetụta dị iche iche, nke nwere ike ịdị mfe dakọtara ọdịdị gị na ihe okike na nke na-egbu maramara.
Ngwongwo ndị a dị elu nwere ihe dị mma, nke nwere ike ime ka ọdịdị ahụ na-enwu gbaa n'emeghị ka akpụkpọ ahụ nwee mmetụta, na mmetụta etemeete na-adịte aka. Were nke ọ bụla n'ime palettes ndị a site n'ụbọchị ruo n'abalị na ọkụ na ngwakọta agba niile nwere ike!
Nkebi Aha Palette anya na anya
Uru anyị 1. Nnwale obi ojoo / Enweghị Anụ Ahụ
2. Vegan / Talc anaghị akwụ ụgwọ
3. Ogologo oge na mmiri
4. Ezigbo na silky
5.Great Pigmentation, Great udidi
OEM / ODM Na-anabata
Ihe nlele Na-anabata
Nkwakọ ngwaahịa 1 PC na imewe agba igbe
Mbupu Site n'ikuku / oké osimiri / Express
Kwụ ụgwọ TT / Paypal / West n'otu wdg.
1.Q: you bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: anyị bụ ndị ọkachamara etemeete rụpụta.
2.Q: Olee agba ole ị nwere maka eyeshadow?
A: Eyeshadow agba ngụkọta anyị nwere agba 140 maka ịhọrọ, anyị nwekwara ike ịhazi agba gị.
3.Q: Kedu ka m ga-esi nweta ihe nlele iji lelee ogo gị?
A: mbụ, ka anyị mara gị chọrọ banyere ihe, mgbe ahụ, anyị ga-enye aro ya na-enye kwuru. Ozugbo ihe niile zuru ezu nwere ike izipu ihe atụ. A ga-akwụghachi ụgwọ nlele ma ọ bụrụ na etinye iwu.
4.Q: you na-anabata OEM ODM na you nwere ike ịme ihe maka anyị?
A: Ee, anyị na-eme OEM ODM ma nye ọrụ ọrụ imepụta.
5.Q: Ogologo oge ole ka m ga-atụ anya inweta ihe nlele ahụ?
A: Mgbe ị kwụrụ ụgwọ nlele ahụ ma zitere anyị faịlụ ndị akwadoro, ihe nlele ahụ ga-adị njikere maka nnyefe na 3-7 ụbọchị ọrụ. The samples ga-ezitere gị site na awara awara na-abata na 3-7 ụbọchị. Nwere ike iji akaụntụ awara awara ma ọ bụ kwụọ anyị ụgwọ ma ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ.
6Ajụjụ: Gini maka oge mbu maka imepụta igwe?
A: N'ikwu eziokwu, ọ dabere n'usoro n'usoro na oge ị na-etinye iwu. Dika ọ ga - abụ ụbọchị 25 - 35. Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ na anyị nwere ike ngwaahịa eruba, anyị na-atụ aro na ị na-amalite ase ọnwa abụọ tupu ụbọchị ga-amasị gị na ngwaahịa na obodo gị.
7.Q: Gịnị bụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị?
A: Anyị na-anabata T / T, Paypal, West Union.
8.Q: Otu esi akpọtụrụ anyị?
A: Anyị ga-achọ ịnyere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nzaghachi ị nwere!
Anyị bịara inyere gị aka-biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na irisbecosmetics@gmail.com.
Nke gara aga: Omenala eyeshadow palette onwe ya ihe ịchọ mma ntecha ntecha ngwaahịa eyeshadow palette na-ere
Osote: N'ogbe eyeshadow palette vegan elu ink onwe labelụ eyeshadow palette omenala gị logo
eyeshadow palette omenala
eyeshadow palette onwe labeelu omenala
eke eyeshadow palette
N'ogbe eyeshadow palette
N'ogbe eyeshadow ink palette
Omenala eyeshadow palette onwe labelụ ịchọ mma ...
Ekike eyeshadow palette ahaziri nkeonwe ...
N'ogbe eyeshadow palette vegan elu ink ...
nkuanya pensụl etemeete nkeonwe labeelu ogologo lastin ...
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu nkọwa, biko biko zitere anyị ajụjụ ugbu a.
Ozi Storelọ ahịa
Nke 168, Lane 6495, Tingwei Road, Jinshan Industrial Mpaghara, Shanghai